किसानको पीडा : सातवर्ष भयो चारलाख लिन बाँकी, पैसा नपाएपछि हामी बालबच्चालाई कसरी कापीकलम दिने ? « ABC NEWS NEPAL | No.1 News channel of Nepal
किसानको पीडा : सातवर्ष भयो चारलाख लिन बाँकी, पैसा नपाएपछि हामी बालबच्चालाई कसरी कापीकलम दिने ?
काठमाडौँ, १ पुस । चिनी उद्योगले खरिद गरेको उखुको भुक्तानी नदिएपछि यतिबेला उखु किसानहरु काठमाडौँको माइतीघरमा धर्ना दिइरहेका छन् । सर्लाही रामनगर गाउँपालिका–१ का वयोवृद्ध किसान गगनदेव यादव पनि त्यहीँ भेटिनुभयो ।
उखुको पैसा पाए सधैँ बर्खामा डुबिरहने बासलाई सुरक्षिँत बनाउने उहाँको आशा छ । यादवले भन्नुभयो, ‘अझै मेरो घरअगाडि पानी छ । नातिनातिनीहरु पानीमा डुब्ला भन्ने ठूलो चिन्ता छ । पैसा आए बासको व्यवस्था पनि गर्न सकिन्थ्यो ।’